कर्पोरेट आइकन Achives| Page2of 15
माछापुच्छ्रे बैंकबाट बाहिरिए सुमन शर्मा, सन्तोष कोइरालालाई कामु सिइओ
काठमाडौं । माछापुच्छ्रे बैंकबाट सुमन शर्मा बाहिरिएका छन् । बैंक सञ्चालक समितिले फागुन २८ गते शर्मालाई पत्र थमाउँदै चैत १ गतेबाट कार्यकाल सकिने जानकारी दिएको हो । चार वर्षका लागि सिइओ नियुक्त भएका शर्मालाई २३ महिनामै विदा गरिएको हो । सोही मितिबाट लागु …
काठमाडौँ । कृषि विकास बैंकको सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मीप्रपन्न निरौला चयन भएका छन् । राष्ट्र बैंकमा ३० वर्षे कार्यकाल पूरा गरी केही समय अघिमात्र अवकाश पाएका निरौला अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको सिफारिसमा सञ्चालक नियुक्त भएका थिए । …
युनाईटेड फाइनान्सका सीईओ अजय मिश्रलाई कम्पनी सचिवको पनि जिम्मेवारी
काठमाडौँ । युनाईटेड फाइनान्स लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सीईओ) अजयकुमार मिश्रले कम्पनी सचिवको समेत जिम्मेवारी पाएका छन् । सोमबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि सीईओ मिश्रलाई कम्पनी सचिव नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । संस्थाको कम्पनी सचिवका रुपमा कार्यरत वरिष्ठ प्रबन्धक …
काठमाडौँ । नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवाल परिसंघको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा मनोनित भएका छन् । परिसंघको गभर्निङ्ग काउन्सिल र पदाधिकारी समितिको हालै सम्पन्न बैठकले परिसंघको विधानको व्यवस्था अनुसार उनलाई वरिष्ठ उपाध्यक्षमा मनोनित गरेको हो । परिसंघको विधान अनुसार वरिष्ठ उपाध्यक्ष आगामी कार्यकालमा परिसंघको …
काठमाडौं । नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघको बरिष्ठ उपाध्यक्षमा चन्द्र ढकालले उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् । राजधानीमा समर्थक उद्योगी व्यवसायीहरुको भेला गर्दै ढकालले उम्मेदवारी घोषणा गरेका हुन् । उनले पुस १७ गते गृह जिल्ला बाग्लुङबाट उम्मेदवारी दिने बताएका थिए । बुधबारको भेलाबाट भने उनले …
काठमाडौँ । गाउँमा प्रजातन्त्रको पक्षमा एक प्रकारको लहर थियो । पञ्चायती व्यवस्थाको कहरका कारण प्रजातन्त्रवादी समूहका नेता लुकीछिपी आउँथे । हजुरबा गाउँभरिकै लोकप्रिय अगुवा हुनुहुन्थ्यो । प्रख्यात जानकी मन्दिर नजीकैको एक गाउँमा निरशु झाको प्रख्याति यति थियो कि सबैले उहाँकै नाम लिन्थे । …
हिमालयन बैंकको सञ्चालक समिति अध्यक्षमा तुलसी गौतम चयन
काठमाडौं । हिमालयन बैंकको अध्यक्षमा कर्मचारी सञ्चय कोषका प्रशासक तुलसी गौतम चयन भएका छन् । बुधवार बसेको बैंक सञ्चालक समिति बैठकले गौतमलाई अध्यक्ष चयन गरेको हो । निजामती प्रशासन लामो अनुभव संगालेका उनी डेढ वर्षअघि कोषको प्रशासकमा नियुक्त भएका थिए । बैंकमा कोषको …
काठमाडौँ । नेपाल व्यवस्थापन संघ(म्यान) को अध्यक्षमा राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सीईओ) किरणकुमार श्रेष्ठ चयन भएका छन् । म्यानको कार्यसमितिमा निर्वाचित सदस्यहरुको आज सम्पन्न बैठकले रावा बैंकका सीईओ श्रेष्ठलाई अध्यक्षमा चयन गरेको हो । त्यसैगरी प्रथम उपाध्यक्षमा राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक बमबहादुर …
काठमाडौं । नेपाल व्यवस्थापन संघ(म्यान)मा नयान् नेतृत्व चयन भएको छ । शुक्रबार सम्पन्न ३९ औं साधारण सभाबाट आगामी कार्य समितिका लागि नयाँ सदस्यहरु चयन भएका हुन् । म्यानको कार्य समितिमा बाणिज्य बैंकका सिइओ किरण कुमार श्रेष्ठ, धर्मानन्ध अधिकारी, अनु जोशी, सुमन पोखरेल, हेमा …
काठमाडौँ । मेगा बैंककी सीईओ अनुपमा खुञ्जेली र राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकका सीईओ किरणकुमार श्रेष्ठ सम्मानित भएका छन् । नेपाल व्यवस्थापन संघ(म्यान) ले शुक्रबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा खुञ्जेली र श्रेष्ठलाई सम्मानित गरेको हो । राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकका सीईओ श्रेष्ठलाई म्यानेजर अफ दी इयर अवार्डबाट …
लक्ष्मी बैंकका अध्यक्ष सुशील घिमिरेले गभर्नर समक्ष लिए सपथ
काठमाडौं । लक्ष्मी बैंकका नवनियुक्त अध्यक्ष सुशील घिमिरेले राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाल समक्ष पद तथा गोपनियताको सपथ लिएका छन् । बैंकको सञ्चालक समितिमा संस्थापक शेयरधनीको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने घिमिरेलाई बैंकको सञ्चालक समितिले अध्यक्ष पदमा नियुक्त गरेको बैंकद्वारा प्रकाशित विज्ञप्तिमा उल्लेख छ …